SAMOTALIS: Talo,Tilmaan, Tusaale iyo Toosin 6
Talo,Tilmaan, Tusaale iyo Toosin 6
DHALINYARADA SOOMAALIYEED XIL QABASHO DUNIDA IYAGAA KOW KA AH. Taariikhda lama bedelo ee sidey tahay inta loo sheego ayaa qaladka laga faa'iidaa. Taariikh been ah lama sexi karo. Markaad qaladkaaga aqoonsato ayaad wax hagaajin kartaa.
Nimanka israaca shuruud la'aanta keenay waxay ahaayeen dhalinyaro 25 ila 30 jir ah. Degdeg, kursi jaceyl iyo waayo-aragnimo la'aan ayey ka ahyd. Waxii qalad dhacay dhalinyaro ayaa geesatay..